Dhibaatooyinka&Xalka - Longou International Business(Shanghai) Co., Ltd.
Dhibaatooyinka caadiga ah ee dhismaha derbiga derbiga iyo xalalka
Xumbo ayaa la soo saaraa inta lagu jiro habka dhismaha iyo ka dib markii muddo ah, dusha sare ee xumbo putty.
① Saldhiggu aad buu u qallafsan yahay xawaaraha xoqidduna aad buu u dheereeyaa;
② Lakabka dhejiska ayaa aad u qaro weyn dhismaha ugu horreeya, in ka badan 2.0mm;
③Qalabka biyaha ee lakabka salku aad buu u sarreeyaa, cufnaantana aad bay u weyn tahay ama aad bay u yar tahay.Sababtoo ah waxay ka kooban tahay faaruqyo badan iyo putty waxay leedahay qoyaan badan oo qoyaan ah, ma neefsato, hawadu waxay ku xiran tahay daloolka bannaan, taas oo aan fududeyn in la tirtiro;
④ Kadib mudo dhismo ah, dilaacyo iyo finan ayaa ka soo baxaya dusha sare, inta badan waxaa keena isku darka aan sinnayn.Warshadu waxay ka kooban tahay qaybo budada ah oo daahday inay milaan.Dhismaha ka dib, xaddi badan oo biyo ah ayaa nuugaya oo barara si ay u sameeyaan dillaac.
① Marka ay u muuqato wax badan oo ah dusha sare ee xumbo, isticmaal spatula si aad toos ugu jajabiso finanka yaryar, oo isticmaal maro ku habboon si aad u xoqdo lakabka dusha sare leh;
② Putty guud ahaan waa la isku qasan yahay si siman, ka dibna u ogolow inay istaagto ilaa 10 daqiiqo, ka dibna isticmaal qalabka korontada ku shaqeeya si aad mar kale u qasto oo aad derbiga u dhejiso;
③Haddii uu jiro finan ka soo baxa dusha labaad ama kan ugu dambeeya ee dhismaha, spatula waa in la isticmaalaa si meesha looga saaro xumbo ka hor inta aan calaamada biyoodka la saarin si loo hubiyo in wax nabro ah uusan ku dhicin dusha sare ee xuubka;
④Darbiyada qalafsan gaar ahaan, guud ahaan dooro suuf qaro weyn sida walxaha saldhigga ah;
⑤ Deegaanka uu gidaarku aad u engegan yahay ama dabayshu ay xoog badan tahay iftiinkuna uu xoog badan yahay, marka hore ku qoyso gidaarka biyo nadiif ah intii suurtogal ah, ka dib marka gidaarku biyo la'aan yahay, xoq lakabka suufka ah.
Ka dib marka la dhammeeyo dhismaha oo qalalan, budada ayaa ka dhacaysa marka gacanta lagu taabto.
①Waqtiga dhalaalka ah ee budada suufka ah ee gidaarka gudaha si fiican looma xakameeyo, oogada ayaa la qalajiyey ka dibna la nadiifin doonaa waa la budada;
② Budada derbiga dibadda ah, dahaarka ayaa ah mid khafiif ah, heerkulka sare ee xagaaga, biyuhu si dhakhso ah ayey u baxaan, lakabka dushana ma haysto biyo ku filan oo lagu daweeyo, markaa way fududahay in laga saaro budada;
③Alaabtu way dhaaftay nolosha shelf, iyo xoogga isku xidhka ayaa sii yaraanaya;
④ Alaabta waxaa lagu kaydiyaa si aan habboonayn, iyo xoogga koollada ayaa si weyn hoos ugu dhacaya ka dib marka la nuugo qoyaanka;
⑤Heerka nuugista biyaha sare ee lakabka salka ayaa sababa in suufku uu si dhakhso ah u engego, mana jiro qoyaan ku filan oo lagu daweeyo.
Xoogga dammaanadda u dhexeeya putty iyo lakabka salka ayaa liidata, waxayna si toos ah uga soo dhacdaa lakabka saldhigga.
① Derbiga hore aad buu u siman yahay (sida suufka dabciga ah, poliurethane iyo rinjiga kale ee saliidda), iyo budada suufku waxay leedahay dhejis liidata oogada;
② Darbiga cusub waxaa lagu dhejiyaa qaab-dhismeedka, dusha sare waa siman yahay oo ka kooban qadar badan oo ah wakiilka sii daayo (saliid mashiinka qashinka ama silikoon);
③ Qalabka alwaax, biraha birta ah iyo kuwa kale ee aan hoobiye ahayn (sida alwaax, shan-plywood, alwaax, alwaax adag, iwm.), putty si toos ah ayaa loo xoqay, sababtoo ah balaarinta dusha kala duwan iyo saamiga foosha, iyo alaabta noocaas ah. Waxay leeyihiin nuugista biyaha xoog leh iyo qallafsanaanta gidaarka gudaha oo aan la hagaajin karin, guud ahaan waxay dhici doontaa 3 bilood ka dib;
④ Maaddadu waxay ka badan tahay nolosha shelf iyo xoogga isku xidhka ayaa hoos u dhacaya.
① Ka saar lakabka diirka oo ula dhaqan si waafaqsan shuruudaha soo socda;
② Polish derbigii hore si aad u kordhiso qallafsanaanta dusha sare, ka dibna isticmaal wakiilka interface (10% xabagta ilaalinta deegaanka ama wakiilka gaarka ah);
③ Isticmaal walax nadiifin ah si aad uga saarto wakiilka sii daaya ama qaybaha kale ee dufanka ee dusha sare, ka dibna mari maaddada;
④ Isticmaal laba qaybood ama dhejis alwaax gaar ah si aad u dhisto;
⑤ Fadlan u isticmaal putty cusub oo gaar ah oogada derbiga dibadda ee marmar, mosaic, dhoobada dhoobada iyo darbiyada kale ee dibadda.Isticmaal gudaha nolosha shelf ee putty.
Inta u dhaxaysa labada lakab ee putty ama inta u dhaxaysa suufka iyo substrate-ka ayaa midba midka kale ka dillaacaa.
① Ka saar lakabka diirka oo dib u dooro suufka gaarka ah si aad u xoqdo;
② Sagxadaha dhismaha ee aadka loo nuugay, waxa ugu wanaagsan in la isticmaalo 10% diluent primer si loo xidho, ka dib marka la qalajiyo, samee lakabka dhejiska ah ama dhismo kale;
③ Putty, gaar ahaan gidaarada gudaha, waxay soo gaabinaysaa inta u dhaxaysa laba dhisme oo dhejis ah intii suurtogal ah;
④ U fiirso ilaalinta inta lagu jiro habka dhismaha.Inta lagu jiro dhismaha putty ama 8 saacadood gudahood ka dib dhismaha, putty waa in aan la gelin biyo.
Ka dib markii la dhejiyay dhejiska muddo wakhti ah, dusha sare ayaa dillaacay.
① Maadada la dillaacay ayaa loo baahan yahay in la saaro.Haddii dildilaaca aanu aad u weynayn, putty dabacsan ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa dhismaha ugu horreeya, ka dibna dhismaha waa in lagu fuliyaa si waafaqsan habka dhismaha caadiga ah;
② Dhisme kastaa waa inaanu noqon mid aad u dhumuc weyn.Waqtiga u dhexeeya labada dhisme waa inuu ka badan yahay 4 saacadood.Ka dib markii suufka hore si buuxda loo qalajiyo, xoqitaanka dhabarka ayaa la sameeyaa.
① Dhisidda ka hor inta aan salku si buuxda u engegin, dhismuhuna wuxuu u baahan yahay in qoyaanka saldhigga uu ka yar yahay 10%;
② Dusha hoose si buuxda looma qallajin, kaliya u gudub dusha sare, lakabka dusha sare waa la qalajiyey marka hore, lakabka gudaha ayaa weli ku jira habka qalajinta, taasoo keentay heerar kala duwan oo hoos u dhac ah oo u dhexeeya lakabyada iyo si sahlan loo dillaaco;
③ Marka lakabka aasaasiga ah la farsameeyo, haddii qalabka wax lagu hagaajiyo iyo kuwa fidsan aysan si buuxda u engegin, gidaarka gudaha ee dhejiska leh ee adag ayaa lagu dabaqaa, taas oo fudud in ay keento dillaac;
④ Dhismuhu aad buu u dhumuc weyn yahay, qalajinta gudaha waa mid gaabis ah, xawaaraha qalajinta dusha sare waa dhakhso, wayna fududahay in la dillaaco.
Jaale isu beddel
Ka dib marka la dhammeeyo dhismaha putty, qayb ama dhammaanteed waxay u muuqan doontaa jaale dhawaan.
Waxay inta badan ku dhacdaa gidaaryadii hore ee gudaha.Dufanka hore ee gidaarka wuxuu isticmaalaa xabag badan oo PVA ah.Xabagtu waa da' wayna qudhuntay si ay u soo saarto aashito aan dheregsanayn.Asiidhka aan saturated lahayn waxa uu la falgalaa ion-ka kaalshiyamka ku jira putty si uu u soo saaro cusbo kalsiyam jaale ah oo u dhigma.
①Daahan ku duub laba jeer xabag bay'ada u fiican, ka dibna mari biyo-xidheenka gudaha ku salaysan ee deegaanka ka dib marka ay si buuxda u engegan tahay;
② Dul laba jaakadood oo shaabad cad ah, ka dibna xoq suufka ka dib marka uu si buuxda u engego;
③ U isticmaal dhejinta dhejiska si aad u dhisto, ama u isticmaal sabuuradda looxa si aad u dhisto.
Tallaabooyin farsamo oo lagaga hortagayo dildilaaca mashruuca kulaylka gidaarka
① Iska caabinta dildilaaca lakabka ilaalinta dildilaaca waa iska hor imaadka ugu weyn, iyo hoobiyeyaasha khaaska ah ee ka hortagga dildilaaca waa in la adeegsadaa oo shabagga xoojinta macquulka ah waa in la qaataa,
Ku darista qadar habboon oo polymer iyo fiber hoobiye ah ayaa waxtar u leh xakamaynta dildilaaca.
②Iyadoo hoobiyeyaasha malaasta ah iyo kor u qaadida lakabka difaaca ee anti crack shabag ka kooban nidaamka oo dhan ayaa ka ciyaara saameyn iska caabin dildilaaca ka sii daran.Qallafsanaantu waa inay ka weyn tahay xadka ugu xun, qallafsanaanta hoobiyeyaasha jilicsan ee jilicsan (qallafsanaanta qallafsanaanta, qallafsanaanta, heerkulka qallafsanaanta, qoyaanka iyo qallafsanaanta kiimikada) iyo qallooca aasaasiga ah iyo lakabka ilaalinta, si loo hubiyo in loo baahan yahay dildilaaca. iska caabin dildilaaca.Isku-dhafka shabakada hoormoonka (sida isticmaalka maro mesh fiberglass), dhinaca kale waxay si wax ku ool ah u kordhin kartaa xoogga jilicsanaanta lakabka difaaca ee anti crack, dhanka kale, waxay si wax ku ool ah u kala firdhi kartaa diiqada, asal ahaan waxay yeelan kartaa dildilaacyo ballaaran. dildilaaca (dilaac) ayaa u kala firdhiyey dildilaacyo yaryar oo badan si ay u sameeyaan saamaynta dildilaaca.Waxay muhiim u tahay hore ee alaabta daahan iska caabin alkali iyo dusha dahaarka leh on marada fiber galaas, noocyo fiber galaas oo uu leeyahay muhiimadda go'aamin in iska caabin alkali muddada-dheer.
③Lakabka qurxinta alaabta ma aha oo kaliya in la dillaaco, laakiin sidoo kale neefta (qoyaanka) iyo iskudubarid lakabka dahaadhka, waxa ugu wanaagsan in la doorto daahan gidaarka dibadda ee laastikada ah.
Lakabka kale ee Interface, lakabka dahaarka, xidhitaanka iyo agabka xoojinta waa in sidoo kale ay keenaan soosaarayaal xirfadlayaal ah si loo hagaajiyo raadinta dhibaatooyinka tayada.
Waa maxay sababta tiirarka laamigu u dillaacaan?
Guud ahaan, waxaa jira saddex sababood oo dildilaaca tiles: mid waa tayada tiles lafteeda;Midda kale waa dhibta ka jirta dhismaha laamiga, tan saddexaadna waa lakabka saldhigga iyo xoogagga dibadda.Hoos waxaan ku soo bandhigi doonaa sababaha gaarka ah si faahfaahsan:
Taleefannada qaarkood waxay leeyihiin heerka nuugista biyaha oo sarreeya iyo iska caabin ku filan oo aan ku filnayn, taas oo sababta tiirarka inay dillaacaan;Taleefannada ma gubaan inta lagu jiro habka toogashada, waxayna dilaacaan inta lagu jiro gaadiidka, kaydinta, iyo isticmaalka.Tayada foornada lafteedu waa dhibaato, iyo qaabka dildilaaca guud ahaan waa mesh-sida, sida cabbirka timaha wanaagsan, saamiga dildilaaca waa mid aad u sarreeya, waxaana laga yaabaa inay jiraan dildilaacyo badan oo foorno ah.Xaaladdani guud ahaan waxay ku dhacdaa alaabooyinka heerkoodu hooseeyo.
Sibidhka heerka sare ah ayaa la isticmaalaa: Caadiga ah No. 425 sibidhka Portland ee caadiga ah waxa guud ahaan loo isticmaalaa laamiga.Saamiga isku dhafka ciidda sibidhka waa 1: 3.Haddii darajada sibidhku aad u sarreyso, sibidhku wuxuu nuugi doonaa biyo badan marka la adkeeyo hoobiye sibidhka.Waqtigaan, qoyaanka dhoobada ayaa si xad dhaaf ah u nuugaya, way fududahay in la dillaaco.Guud ahaan, waxaa loo muujiyaa sida tiles badan oo dillaacsan, iyo jihada qaabka dildilaaca waa mid aan joogto ahayn.
②Suuqyada dhoobada ayaa lagu dul dhejiyaa durbaanka godan taasoo keenaysa in tiirarku dilaacaan: durbaannada godan iyo durbaannada aan bannaanayn, dhoobada sibidhka iyo dhoobada dhoobada ayaa leh iskudhafyo ballaadhineed oo kala duwan, kuwaas oo sababa in tilesku qalloociyaan oo dilaacaan.Guud ahaan, qaybinta foornada dillaacsan waa mid aan joogto ahayn, dildilaacaduna sidoo kale waa kuwo aan joogto ahayn.Dildilaacyadu waa toosan waxayna leeyihiin dherer kala duwan.Garaacdu waa mid hooseeysa, dhuuban oo dhoobo leh.
③Wax tollayn ah oo lagagama hadhin laamiga, balaadhinta iyo foosha ee dhoobada dhoobada ah iyo lakabka salka ayaa ah kuwo aan iswaafaqayn, balaadhinta kulaylka iyo foosha ayaa sababa in dhoobada dhoobada ay dilaacdo.Guud ahaan, waxaa jira dildilaacyo ku yaal geesaha tiirarka, dildilaaca yar yar ee dusha sare, iyo qaab-dhismeed gaaban oo gaaban.
④ Dhuxusha dhoobada ayaa dillaacsan ka dib marka la gooyo: dildilaaca madow ayaa la sameeyaa inta lagu jiro habka goynta.Muddo ka dib, dhoobada dhoobada ah waxaa saameeya hoos u dhaca sibidhka iyo xoogagga dibadda.
Lakabka saldhiga iyo xoogag dibadeed
①Dilka gidaarada iyo dildilaaca ay sabab u tahay dhibaatooyinka juquraafiga ee u gaarka ah, heer go'an oo hoos u dhac ah ayaa iman doona, kaas oo sababi doona in darbigu qalloobo oo uu dillaaco sidoo kale sababa dildilaaca tile.Guud ahaan waxay u muuqataa dildilaacyo joogto ah oo joogto ah.
② Dildilaaca taayirada ka dhashay gariirka gidaarka ee uu sababay jabinta darbiga
③Waxay aad ugu dhowdahay meelaha kulaylka qaarkood, heerkulkuna wuu isbedelaa sababtoo ah qaboojin badan iyo kulayl xad dhaaf ah, iyo balaadhinta kulaylka iyo foosha ayaa sababa in tilesku dillaacaan.Dhacdadani guud ahaan waxay ka dhacdaa jikada, qolalka kulayliyaha, iwm.